'हामी लिखितम नगरबासी भएपनि गाउँबासी नै हौं' : बिदुरकुमार लिंथेप, मेयर - Rojgar Manch
‘हामी लिखितम नगरबासी भएपनि गाउँबासी नै हौं’ : बिदुरकुमार लिंथेप, मेयर
शनिबार, ११ पुस, २०७७
मादी नगरपालिका प्रदेश नं १ अन्तर्गत संखुवासभामा राजमार्गमा नजोडिएको नगरपालिका हो । हिमाली जिल्ला भएको नाताले मादी भौगोलिक हिसाबले सुगम छैन । तर, मादी पूर्वाञ्चलकै शैक्षिक हवका रुपमा चिनिन्छ । मादी प्राकृतिकरुपमा भने धनी छ । गुँरासको राजधानी तीनजुरे मिल्के जल्जलेको एक भाग मादीमा नै पर्छ । जहाँ ट्रेकिङ्ग रुटका साथै विभिन्न प्रजातीका गुँरास पाइन्छन् । मादी नगरपालिकाको पहिलो मेयरमा निर्वाचित हुनुभएका विदुर कुमार लिंथेप अहिले मादीको विकास निमार्णमा लाग्नुभएको छ । उहाँ मादीलाई युवाहरुको भन्दा पनि अधबैसे तथा बुढाबुढीहरुको बासस्थान रहेको नगरपालिका भन्नुहुन्छ । अधिकांश युवाहरु कोही रोजगारका लागि विदेश, कोही अध्ययनका लागि बाहिर त कोही जागिरका लागि जन्मस्थल छोडेपछि यो नगर युवाबिहीन जस्तै भएको उहाँको भनाई छ । राजमार्गमा नजोडिए पनि मादी, ९ वटै वडामा बस पुग्ने हिमाली जिल्लाको एक्लो नगरपालिका भएको दावी मेयर लिंथेपको छ । यद्यपी पहाडी जिल्लाको सानो नगरपालिका भएकाले मादी लिखितम नगरबासी भएपनि गाउँबासी नै भएको स्वीकार्नुहुुन्छ । जनताको अपेक्षा अनुसार सबै काम गर्न नसकेता पनि धेरै काम भइरहेको बताउने लिंथेप विकासका लागि बसाईसराई सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको बताउनुहुन्छ । हिजोको मादी नगरपालिका, अहिलेको मादी नगरपालिका र भोलिको मादी नगरपालिकाका बिषयमा उद्वव भट्टराईले मेयर बिदुरकुमार लिंथेपसँग गरेको कुराकानी :
तपाईले पहाडी जिल्लाको मादी नगरपालिकाको पहिलो मेयर, मादीलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
मादी नगरपालिका पुर्व तीनवटा गाविसहरु मावादिन, मादीराम्बेनी र मादीमूलखर्क मिलेर बनेको सानो नगरपालिका हो । समुन्द्री सतहबाट ५ सयदेखि २९ सय मिटर उचाइसम्म यो नगर फैलिएको छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १४ हजार ४ सय ७० जनसंख्या रहेकोमा हाम्रो आफ्नै सर्वेअनुसार यो संख्या १५ हजार ३ सय ३२ रहेको छ । यो नगरपालिका युवाहरुको भन्दा पनि अधबैसे तथा बुढाबुढीहरुको बासस्थान रहेको नगरपालिका हो भन्दा फरक नपर्ला । अधिकांश युवाहरु कोही रोजगारका लागि विदेश, कोही अध्ययनका लागि बाहिर त कोही जागिरका लागि बाहिर रहेका छन् । मादी भौगोलिक हिसाबले अलि जटिल नगरपालिका पनि हो । हिमाली जिल्ला भएको नाताले साथै राजमार्ग भन्दा अलि टाढा र भिरालो प्रकृतिको जमिन मादीमा रहेको छ । सामाजिक हिसाबले विभिन्न जातजातिको बसोबास रहेको छ । मादीमा एउटा क्याम्पस, दुईवटा उच्च मावि र आठवटा माविहरु रहेको छ । यहाँ मूलत कृषि र पशुमा आश्रित जनसमुदायको बसोबास रहेको छ । मादीको माथिल्लो भेगमा तिनजुरे मिल्के गुँरासको राजधानी पर्छ । हाम्रो तल्लोभागमा ऐतिहासिक राम मन्दिर रहेको छ । मादी पुर्वमा तेह्रथुम जिल्ला, पश्चिममा चैनपुर नगरपालिकाका साथै ताप्लेजुङ जिल्ला र दक्षिणमा धर्मदेवी नगरपालिकासँग जोडिएको छ ।
राजमार्गमा नजोडिएको र भौगोलिकरुपमा पनि विकट हुँदा मादीका आकर्षण केही छैन त ?
मादीको मूख्य आकर्षण भनेको यो ठाँउ शैक्षिक हव हो । यहाँका अगुवाहरुले यस ठाँउलाई शैक्षिक केन्द्रकोरुपमा विकास गर्नुभएको थियो । दोश्रो भनेको हामी प्राकृतिकरुपमा धनी छौ । गुँरासको राजधानी मादीमा नै पर्छ । हाम्रो माथिल्लो भेगमा विभिन्न प्रजातीका गुँरास पाइन्छन् । त्यहाँ ठुलठुला चरन क्षेत्रहरु रहेका छन् । मादीमा अर्को चर्चित राममन्दिर रहेको छ । दन्त्यकथाका आधारमा राम नै यस मन्दिरमा आएर बास बसेको भन्ने लोकउक्ति छ । पुरातत्व विभागले पनि त्यसलाई एक सय २५ बर्षभन्दा पुरानो भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यो हिसाबले यो ऐतिहासिक ठाउँ हो । खासगरी कृषि र पशुको केन्द्र बनाउने अभियानमा छौ हामी । त्यसकारण पशु सम्बन्धि, कृषि सम्बन्धि अध्ययन गर्नका लागि पनि मादी उपयुक्त गन्तब्य हुनेछ ।
प्राकृतिक र ऐतिहाँसिक महत्वका ठाउँ देखाउनु भयो तर आम जनमानसलाई जानकारी छैन, पर्यटन विकासमा नगरपालिका लागेको छैन ?
हामीले आफ्नै ठाउँको विकासमा धेरै लाग्न पाएका छैनौ । यसलाई जैविक विविधता र पर्यटनसँग जोड्न बाँकी नै छ । अहिले हामी महत्वपुर्ण र आधारभूत काममा अल्झनु परेको र नगरपालिकाको जग बसाल्नका लागि नै समय धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा छौ । म नै मादी नगरपालिकाको पहिलो संस्थापक मेयर हुँ । मादीलाई अब हामी प्राकृतिकरुपमा भन्दा पनि विकास निमार्णका कदम चालेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाइरहेका छौ । मादीमा भोलिका दिनमा निकै आकर्षक पक्षहरु यहाँहरुले पाउनुहुनेछ । हामी अहिले यहाँ फुलहरुको बगैँचा बनाउने अभियानमा छौ । डिपिआर बनाइसकेका छौ । त्यसपछि हामी टिएमजे क्षेत्रलाई अलि पृथकढंगले विकास गरेर ओपेन युनिभर्सिटीको रुपमा लैजान खोजिरहेका छौ । केन्द्रदेखि टिएमजेसम्मको फुटरेलको हामीले सहरी विकास मन्त्रालयसँग मिलेर डिपिआर तयार गरिसकेका छौ । यो फाइनल चरणमा छ । मादी राजमार्ग भन्दा टाढा नभएपनि अलि पृथक सेमी आईसोलेटेड एरिया हो । मादीबासी लिखितम्को सहरबासी हौ तर व्यवहारको हामी गाउँबासी नै हौ ।
राजमार्गले नजोडेको मादीलाई जोड्नका लागि केही गर्नु भएको छैन ?
हामीले काम गरिरहेका छौं । राजमार्गमा जोडिनेगरी हाम्रै नगरपालिकाले करिब २५ करोड लागतमा सडक कालोपत्रे गर्दैछ । त्यसको काम अगाडि बढिरहेको छ । त्यो बाटो आइसकेपछि चाँहि राजमार्ग र केन्द्रसँग हाम्रो पँहुच हुन्छ । यो राजमार्ग चाँहि हाम्रो मुलद्धार हो । हाम्रो सबै सम्भावनाको ढोका यो बाटोले अवरोध गरेको हुनाले यो बाटो बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । हाम्रो टिम आएपछि धेरै गौरवको आयोजना बनाउनुभन्दा थोरै गर्ने तर पुरा गर्ने गरी गरिरहेका छौं । मादी ९ वटै वडामा बस पुग्ने हिमाली जिल्लाको एक्लो नगरपालिका हो । हामी आएपछि नै हाम्रो पहलमा बाटोहरुलाई बस गुड्न योग्य बनायौ । अहिले प्रत्येक वडाका बासिन्दामाझ यातायातको पहुँच पु¥याइसकेका छौ । विकास हामीलाई छिटो चाहिएको छ । तर हाम्रो साधन, स्रोत र भौगोलिक हिसाबले त्यो सम्भव छैन ।
मादी युवाबिहीन भयो त भन्नुहुन्छ तर युवाहरुलाई यही रोक्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउनु भएको छैन, तपाई स्थानीय सरकार हो त ?
त्यसको पनि पहल त भएको छ । तर त्यसमा मेरो फरक दृष्टिकोण रहेको छ । मान्छेको आवश्यकता, इच्छा, चाहानालाई कुण्ठित गर्नु हुन्न भन्ने पक्षको मान्छे हुँ म । मान्छेहरु आजभन्दा भोलि धेरै प्रगति चाहन्छन् । पैसा भएका मान्छेहरु मादीभन्दा बाहिर बँसाईसराई गर्छन् । बाँठोटाठो शारिरीक रुपले हट्टाकट्टा पनि बाहिर हुइकिन्छन् । मलाई लाग्छ मादिको विकास र समृद्धि ल्याउने भनेको यहाँ बस्ने बाआमाले हो । त्यसैले हामीले बाआमाहरुको समुह बनाईदिएका छौं । बुवाहरुलाई कृषि समुह र आमाहरुलाई आमा समुह बनाईदिएका छौ । नगरपालिकाले विधान बनाएर आमाहरुलाई बचतको काम गर्न लगाउने र बाहरुलाई कृषिको काम लगाउने भनेर कार्यक्रम लन्च गरेका छौ । यसको पोजेटिभ परिणाम आइरहेको छ ।
तर, युवाहरुलाई नै रोक्न सक्ने कार्यक्रम छैनन् ?
हामीले कृषि र पशुपालनका लागि प्रसस्त कार्यक्रम ल्याइरहेका छौं । व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरुलाई हामीले व्यवसाय गर्न अनुदान दिइरहेका छौ । एक रोपनी जग्गा बराबर हामीले ५ हजार अनुदान दिएका छौ । हामीले बढीमा २० रोपनीसम्म व्यवसाय गर्नेहरुलाई प्रोत्सानको हिसाबले अनुदान दिएका छौ । मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो अनुदान हो । तर अब व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने युवाहरु पाउन चै गाह्रो छ । हामीले प्रत्येक बाटोको सय मिटर भित्र ५ वटा बिरुवा लाउनेलाई पनि अनुदान रकम दिएका छौ । यो हिसाबले स्थानीयबासीलाई बिस्तारै व्यवसायी बनाउने लक्ष्य नगरपालिकाको छ । तर, ज्ञानको अभाव छ । हामीले परम्परागत खेती मात्र गरिरहेका छौ । यसलाई नयाँढङ्गले लानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौ । मादीमा अहिले ८६ वटा कृषि समुहहरु छन् । त्यसमा झन्डै १८ सय घरधुरी हामीले समेटेका छौ । हामीसँग एक सय ६ वटा आमा समुहहरु हुनुहुन्छ, जसमा २२ सय घरधुरी समेटेका छौ ।
मादी सबैभन्दा पछि बनेको नगरपालिका हो, नगरपालिका भएपछि अन्य सुविधा नगरवासीलाई के के थपिदैछन् ?
हामी त्यतिकै चुप लागेर बसेका छैनौ । मादीमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउन शुरु भएको छ । मेरै पहलमा नेपाल सरकारमार्फत स्वीकृत गराएर धमाधम अस्पताल बनिरहेको छ । हाम्रै प्रस्तावमा मादी उच्च माविलाई देश कै नमुना विद्यालय बनाउन सफल भएका छौ । विशेषगरि शिक्षामन्त्रीले यसमा जोड गर्नुभयो । त्यो हिसाबले हामी शिक्षामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि गत सालदेखि नै ल्याएका छौ । बाहिरबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्न आउनेलाई नगरपालिकाले २ हजार प्रति महिना छात्रवृत्ति राखेको छ ।
हामी शिक्षा क्षेत्रसँगै कृषि र पशुपालनको क्षेत्र पनि अगाडि बढाउदै लैजान जोड गरिरहेका छौ । गतसाल पनि ५४ वटा दुधालु गाईहरु बाहिरबाट भित्राएका छौ । बोयर जातिका बाख्राहरु भित्राएका छौ । हामीसँग बाख्रा पकेट क्षेत्र, बंंगुर पकेट क्षेत्र, बन्दाकोपी÷आलु पकेट क्षेत्र, सुन्तला पकेट क्षेत्र, किबी पकेट क्षेत्र, एभोकाडो पकेट क्षेत्र, अलैची पकेट क्षेत्रलगायत रहेका छन् । मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौ, बाहिरबाट चौपाय ल्याउनु पर्दैन । अहिले हामी प्रत्येक वडामा अर्गानिक मल तथा कम्पोष्ट मल बनाउन अनुदान दिइरहेका छौ ।
हामीले प्रत्येक घरमा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउँने गरी काम गरिरहेका छौ । आफ्नै मुल भएपनि १६ सय मिटरसम्म पाइप उपलब्ध गराएका छौ । यस्तै बिद्युत आपुर्तिका लागि काठे पोल मात्र थियो अहिले त्यो सबै फे¥यौ र यो वर्ष सबै काठे पोललाई विस्थापित गर्नेगरि काम अघि बढिरहेको छ । यो वर्षभित्र हामी सबै नगरबासीलाई बिजुली बत्ति पु¥याएर मादिलाई उज्यालो मादी बनाउछौ ।
तपाई चाहेर पनि सोचे अनुसार विकास गर्न सकिएन भन्नु हुन्छ, बाधक के रहेछ ?
यसमा मेरो फरक दृष्टीकोण छ । नेपालमा विकासको बाधक भनेको बसाईसराई हो । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको माइग्रेशन रहेको छ । यता पहाडि क्षेत्रतिर विकासमा गरेको लगानी खेर गइरहेको छ भने तराईका क्षेत्रहरुतिर पनि उत्तिकै लगानी खेर गइरहेको छ त्यो बसाँइसराईको कारणले गर्दा हो । मानिस डेगिलो भएर कहाँ बस्छ त्यहाँ विकास गर्न सकिन्छ तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा स्थानीय तहलाई धेरै समस्या भएको छ । नेपालको नमुना विकास गर्ने हो भने र समृद्धि ल्याउने हो भने ३० वर्ष बसाँइसराई पुरै बन्द गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, स्थानीय तहको प्रमुख भएर काम गर्दा अहिलेसम्म जनताका चाहानालाई पुरा गर्न सक्नु भयो, कतिको सन्तुष्टी हुने अवस्था मिलेको छ ?
नगरबासीहरुले आजको दिनसम्म नगरको काम र विकासमा साथ दिनुभएको छ । उहाँहरुको उत्साहलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । हामीले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार गर्न सकिरहेका छैनौ । कोभिडका बाबजुत पनि हामीले साना ठूला कार्यक्रम तथा योजनाहरु अगाडि बढाइरहेका छौ । र, बाँकी योजनाहरुलाई पनि क्रमश पुरा गर्दै जाने छौ, नआत्तिन अनुरोध गर्छु । विकास निर्माण जादुको छडि होइन यो क्रमश अगाडि बढ्छ । जति मादिबासीहरुले अपेक्षा राख्नुभएको थियो, सबै पुरा भएको छैन । तर, हामी कोसिस गरिरहेका छौ ।
साहित्यर्वार्ता : ‘साहित्य सृजनाबाट मानवीय जीवन बोध गराउन सकियोस्’- चित्रा पौड्याल कोइराला
‘अन्य नगरपालिका भन्दा पाँचखपनको विकासको गति तीब्र छ’ –विपिन राई, मेयर
जिवन्त भोगाई : सोचे जस्तो छैन् कोरोना !
एसिया प्यासिफिक आठौं क्षेत्रीय भेला तथा पहिलो विज्ञ सम्मेलन शनिवार, तयारी पुरा
काठमाडौ उपत्यकामा २५४ सहित देशभर थप ५१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौ उपत्यकामा २५४ सहित देशभर थप ६०३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी […]
आजदेखि मुलुकभर घटना दर्ता विशेष अभियान सुरू
गृह मन्त्रालयले नागरिकको घटना दर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। घटना दर्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र छुटेकालाई समावेश […]
ऐतिहासिक धरहरा टावरको पुनःनिर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यही वैशाख ११ गते उद्घाटन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका […]
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिम कम गराउन काठमाडौँ महानगरपािलिकाका प्रत्येक वडाले दुई जनासम्म दैनिक ज्यालादारीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खटाउन पाउने भएको […]